Iibso Soosaarida Maca Rootka Macmalka ah ee Peruvian - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
dib u eegista 30
$ 39.99 qiimaha joogtada ah $ 65.99
Soosaarida Macdanta Macaamiisha Macmalka ah ee Peruvian gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Magaca Summada: Cuntooyinka Hivital
Nolosha Khadka: 3 sano
Cutubka Lacagta: Dhalooyinka
Tusmada: 120 kaabsal vegan
Lagu soo saaray: Spain
Shahaadooyinka: 100% Dabiiciga ah, Vegan, Gluten-Free, magnesium stearate lahayn, GMO-Free
Maca Extract Waxay hagaajineysaa tamarta, istaandarka, waxqabadka cayaaraha, xusuusta, feejignaanta, nidaamka difaaca, iyo isu dheelitir la'aanta hoormoonka
Qaacido aad u fiican: Ku saleysan soosaarida Maca ee Macaamiisha ee ku saleysan 10: 1 taas oo kordhinaysa tamarta heerarka, waxay hagaajineysaa waxqabadka cayaaraha waxayna caawineysaa habka difaaca jirka iyo dheelitirka hoormoonka al.
Kaabsal tiro badan oo Doomaha kasta ku jira: Waxaan ku siineynaa 120 kaabsal vegan doon, waxaan siinaynaa 4 bilood.
MACA-da ugu fiican: Waxaa lagu duubay 400 mg oo isku urursan 10: 1 Macaamiisha Peruvian Maca ee laga soo saaray 0,6% Macaínas iyo Macamidas, mabaadi'da firfircoon ee Maca, oo u dhiganta 4000 mg dhirta natiijada ugu wanaagsan. Waxsoosaarka kale waxay isticmaalaan kaliya boodhka, oo aan laga soo saarin wax urursan, markaa waxtarka badeecaddu aad ayuu uga hooseeyaa.
Tayada ugu sareysa iyo Amniga: Waxsoosaarkayagu waa 100% Dabiici ah, Vegan, Gluten-free, lactose no, soy no, magnesium stearate, lahayn sonkor, ma jiraan wax walxaha ilaaliya ama midabaynta, dhadhamin laguma daro, trans-transgenic (GMO-Free).
Lagu soo saaray Spain GMP & ISO baasaboor la aqoonsan yahay. Cuntooyinka Hivital waxay ka diiwaan gashan yihiin caafimaadka (AECOSAN) oo leh lambar 26.019181B.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 30
Adeeg ganacsi oo aad u wanaagsan. Adeegga saadka ee Pesimo-express Mail.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 84324.
dib u eegista 84324
Amakaagaya fpr xagaaga wacan
Shaati-gacmeed Long Slim Fit Balanbaalis daabacay Cotton Ragga
Parfait, tilmaanta comme la!
Sii Garbaha Dushooda leh Dhar Gaaban oo Kooban & Dharka Madaxa oo loogu talagalay Gabdhaha Dhallaanka ah
Waan jeclaa dacwada! Tayada iyo adeeggu waa heer sare!